Abacwaningi oSolwazi Dean Gopalan (kwesokunxele) no-Bruce Biccard.
Ucwaningo Luveza Ukuthi I-Afrika Inezinga Eliphezulu Lokufa Kwiziguli ze-COVID-19
Ucwaningo olusanda kwenziwa ebantwini abadala abayizi-3 140 abalaliswa ezibhedlea ezingama-64 emazweni ayishumi phakathi kukaMbasa noZibandlela wonyaka wezi-2020 luveze ukuthi i-Afrika inezinga eliphezulu lokufa kweziguli ze-COVID-19 kunakwezinye izindawo. Okunye okungaba yimbangela yalokhu wukushoda kwezinsiza zokwelapha nokusetshenziswa kancane kwalezo ezikhona. USolwazi Dean Gopalan, Inhloko yoMnyango we-Anaesthesiology and Critical Care e-UKZN nalowo owayeyi-anaesthesiologist yase-UKZN, uSolwazi Bruce Biccard yibona ababhali abaphambili bocwaningo olusanda kushicilelwa ebhukwini locwaningo elihlonishwayo i-The Lancet.
Lolucwaningo luyingqophamlando njengoba lungolokuqala ukuveza ubufakazi bokuthi i-COVID-19 izithinta kanjani iziguli ezibucayi e-Afrika. I-African COVID-19 Critical Care Outcomes Study (i-ACCCOS) ibihlose ukubona izinsiza zokwelapha nabelaphi, izimo ezikhona ezweni nemizamo yokwelapha okuhambisana nokufa noma nokuphila ebantwini abadala (abaneminyaka ephakathi kweyi-18 noma ngaphezulu) abangeniswe emagunjini abagula kakhulu. Lolucwaningo lwenziwe eGibhithe, eTopiya, eGhana, eKenya, eLibya, eMalawi, eMozambique, e-Niger, e-Nigeria naseNingizimu Afrika.
Abacwaningi bathole ukuthi ngemva kwezinsuku ezingama-30, cishe uhhafu (ama-48%) weziguli ezigula kakhulu ziyashona. Ucwaningo lulinganise ukuthi kudingeka kwande i-dialysis ngokuphindwe kasikhombisa kanti i-Extracorporeal Membrane Oxygenation (i-ECMO) kudingeka yandiswe ngokuphindwe ka-14 ukuze kunakekeleke kahle iziguli ezine-COVID-19.
Ngaphezu kwalokho kutholakale ukuthi izinto eziyisisekelo ezingabizi ziyashoda, kwatholakala ukuthi amagumbi angama-86% akwazi ukuhlinzeka nge-pulse oximetry (ukukwazi ukubheka umoya osegazini) kuzona zonke iziguli ezixinekile. Kanjalo izibhedlela ezingama-17% ezine-ECMO kodwa nakuba kunobufakazi ukusetshenziswa kwayo ezigulini ezine-COVID-19 ezihluleka wukuziphefumulela, inikwa iziguli ezingaphansi kwe-1%.
U-Biccard waseGroote Schuur Hospital naseNyuvesi yase-Cape Town, obengomunye wabaholi bocwaningo, uthe: ‘Lolucwaningo ngolokuqala oluveza isithombe esiphelele sokuthi kwenzekani ebantwini abaxinwe yi-COVID-19 e-Afrika, olunemininingwane yamazwe neyasezibhedlela eziningi. Ngeshwa, luveza ukuthi asinawo amandla okuhlenga abantu ngenxa yokushoda kwemibhede yabagula kakhulu nokushoda kwezinye izinsiza zokwelapha emagunjini abagula kakhulu.’
Uchaze wathi: ‘Ukungakwazi ukufinyelela ezintweni ezingahlenga impilo yabantu njenge-dialysis, ukulalisa iziguli ukuze zikwazi ukuphefumula kahle, ukubheka umoya egazini kungaba yimbangela yokufa kwaleziziguli kanti kukhombisa nokuthi kungani esigulini esisodwa kweziyisishiyagalombili kuhoxiswe ukwelapha noma singelashwanga kahle. Sethemba ukuthi imiphumela ingenza ukuthi izinsiza zokwelapha zabiwe ngendlela efanele ezigulini ezixinekile, okungahlenga impilo ezindaweni lapho kuntuleka khona izinto zokwelapha emhlabeni.’
Iningi leziguli bekungamadoda (ama-61% aneminyaka engama-56) avele enezinye izifo. Ngokuka-Gopalana uthe: ‘Abantu abavele benezinye izifo basengozini enkulu. Ukuba nesifo samaphaphu noma isandulela-ngculazi kwandise amathuba okufa, kwathi ukuba nesifo sesibindi kwawandisa kathathu amathuba okufa. Ushukela nawo ukhombise ukuhambisana namathuba okufa (ngama-75%). Kepha, okungahambisananga nocwaningo oludala ngukuthi ukuba yindoda kwandise amathuba amakhulu okufa.
‘Umphumela othi amadoda awekho engcupheni enkulu ubungalindelekile,’ kusho u-Gopalan. ‘Kungenzeka ukuthi abantu besifazane abebekulolucwaningo bebesengozini enkulu yokufa ngenxa yokungalithola usizo lokwelashwa, noma ukuthola usizo oluncane noma ukucwaswa ekunakekelweni ngenkathi bexinwe wukugula.’
Ngokomunye wababhali bephepha locwaningo uDkt Vanessa Msosa waseKamuzu General Central Hospital eMalawi uthe ‘Lokhu kubambisana kwamazwe ahlukene kulethe ulwazi olumqoka oludingeka kakhulu ngezidingo zokunakekelwa kweziguli zethu ezine-COVID-19. Nakuba abantu abasha abagcwele emazweni amaningi ase-Afrika kwenze ukuthi lingabi phezulu izinga lokufa emhlabeni kodwa ukufa ezibhedlela kungenxa yokushoda kwezinsiza zokwelapha, njengoba benguhhafu abafika esibhedlela abalaliswa emagunjini abagula kakhulu. Izibalo zizoqhubeka nokwanda kuze kubhekanwe nendaba yezinsiza zokwelapha.’
Lolucwaningo beluxhaswe yi-Critical Care Society of Southern Africa kanti lwenziwe ngabacwaningi be-African COVID-19 Critical Care Outcomes Study (ACCCOS).
I-CCA Izokwethula I-Cabaret and Beyond Festival 2021 Yokuqala
Isifundiswa Sase-UKZN Engqophamlandweni Yocwaningo Ngezilimi
Ucwaningo Lwesikhathi Lapho Kwaqala Khona Izinkanyezi Lumtholele IMSc